Wararka Maanta: Sabti, July 28, 2018-Warbixin ku saabsan khatarta cudurka cagaar-showga oo WHO u aqoonsatay maanta oo kale ka hortagiisa
Sabti, July, 28, 2018 (HOL)- Iyadoo sanad kasta maanta oo kale 28-ka Bisha July ay hey'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO u aqoonsatay maalinta loo asteeyey ka hortaga cudurka Cagaarshowga ayeey Hiiraan Online halka idinku soo gudbin doontaa warbixin ku saabsan khatarta cudurka.
Prof/Dr. Cismaan Maxamuud Dufle oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa sheegay in cudurkan cagaarshowga uu yahay cudur qatar ah oo caalamku u aqoonsaday dilaaga aamusan, wuxuuna xusay in halku dhega caalamiga ah ee cudurkan sanadka 2018-ka laga dhigay Ciribtirka Cudurka Cagaarshowga (Eliminate Hepatitis) sida WHO shaacisay, iyadoo ololaha sanadkana uu yahay helida malaayiinta qof ee la nool cudurka ee aan iska warqabin (Find missing millions).
Waa nooca ugu badan sanadkii wuxuu ku dhacaa tiro dhan 1.4 milyan , wuxuu ku badan yahay caruurta dadka waaweyn waa ku dhacaa, hab saf mar ah (Outbreak) ayuu leeyahay. Wuxuu ku badan yahay goobaha nadaafadoodu hooseyso dadka badan ay ku nooloyihiin (Crowded area) sida xeryaha qaxootiga IWM.
Feyruska wuxuu soo raacaa saxarada , waxaana gudbiya gacamaha kadib marka la cuno cunto , khudrad , miro oo aan si fiican loo nadiifin iyo marka la cabo biyo aan nadiif aheyn oo jeermiga ku jiro.
Noocan A dhaqso ayaa looga bogsadaa , wax raagis ahna ma yeesho (Chronic Form).
Hooyada uurka leh oo cunuga u gudbin karta xiliga dhalmada (Perinatal Transmission) xiligaas oo ah
kan ugu badan ee raagista yeesha 90%.§
Cirbid lagu duray qof jiran oo qof kale loo isticmaalo,
Qalabka ama Sakiinta Gar xiirka , madax xiirka oo wadar loo isticmaalo.
Wuxuu ku gudbi karaa galmada (Sexual Intercourse).
Wuxu kaloo ku gudbaa daawo dhaqameedka sida:-
– Dalqa goynta , qun goynta , ilka bixinta , gudniinka fircooniga , gudniinka raga si wada jir ah ,dhalma dhaqameedka , sarsarmada , toobinta oo intaba qalabka loo isticmaalayo aan la jeermi dilin.
– Bukaanada kiliyaha ka jiran oo la dhaqo (Renal Dialysis)
– Buukanada HIV qaba oo difaacooda hooseyo.
Waxaa xusid mudan in cagaarshowga B (HBV) oo boqal jeer (100%) ka dhaqso badan yahay HIV xowliga fiditaanka cudurka.
Feyruskan cagaarshowga B 7 maalmood ayuu dibada ku noolaan karaa asagoo waqtigaasku gudin kara cudurka.
Cagaarshoowga C ( Hepatitis C Virus – HCV).
Calamooyinka Cudurka Cagaarshowga.
Qeybta Sadaxaad: waa xiliga ka bogsashada cudurka (Convalescence phase):Xiligaan calaamooyinkii cudurka waa yaranayaan ilaa ay ka baaba’aan sida cagaarka indhaha iyo oogada oo baaba’aya, bukaanka waa ka soo fiicanaayaan calaamadihii hore laakin taas macanaheedu ma ahan in bukaanku ka reestey cudurkii balse beerkii wali waa dhaawacan yahay oo waa bukaa , waxeyna qadaneysaa bogsashadiisa buuxda muddo 2 ilaa iyo 4 bilood ah.
Arintaas si cilmi ah hadaan u fasirno, waa tii horay aan u soo xusney sadaxdii qeybood ee calaamooyinka gaar ahaan xiliga cagaarka indhaha iyo oogada ay soo if baxo in uu jiri karo 2,3 ilaa 4 usbuuc kadibna ay baabi doonaan calaamooyinkaas oo dhan, hadabo waxaa isku soo beegmaya xiliga bukaanka la gubo iyo dhamaadka caadiga ahaa ee calaamooyinka taas ayaana keentay in dadka qaarkiis u qaataan in bukaanka uu dabka ku reestey , taasana waxey keeneysaa in bukaanku dib u bilaalbo socod iyo dhaqaaqiisi nolol maalmeed midaas oo sii xumeyn doonto xaalada caafimaad ee beerka ayadoo bilooyin kadib (6 bilood) uu cudurkii u gubaayo nooca raagiska yeesha (Chronic Hepatitis).
Siyaabaha looga hortago Cagaarshoowga :
Ugu horeen waa in la xoogiyaa nadaafada gacmaha cuntada ka hor iyo markii musqusha lagalo, waa in la xoojiyaa nadaafada guriga iyo musqusha, waan in si fiican loo mayraa qudaarta, waa in lailaaliyaa nadaafada raashiinka la cuno.
Nasasho dheer oo sariirta korkeeda uuku nasto, wax shaqo ahna uu ka fogaado muddo dhan ugu yaraan 3 ilaa 4 usbuuc.
Raashinka: Qofku haduu afka wax ka qaadan karo waa in uu badsadaa qaadashada cuntada macaan ama malabka shinnida si uu helo tamar badan (energy). Dabcan arrimahaas aan soo sheegnay waa ka reebban yihiin qofka kaadi-macaanka qaba.
Waa in uu aad u yaraystaa cunista subagga iyo cuntada shiilan. Brotiinka qiyaas ayuu u qaadan karaa. Waa in uu ka fogaado bukaanku cabdidda khamiriga , sigaarka iyo cunidda daawo aan dhaqtar u qorin.
Dr Dufle ayaa ugu danbeyntii ku soo gunaanaday in bulashada soomaaliyeed ay xoojiyaan ka hortagga cudurrada faafa iyagoo kordhinaaya wacyigooda caafimaad si loo helo bulsho caafimaad qabta, waxaana hubaal ah in ka hortagga cudurrada ka wanaagsan yahay daaweynta.